Yedu maindasitiri nzvimbo inovhara nzvimbo inosvika zviuru mazana maviri nemazana maviri emamirimita. Isu tine rimwe remasangano makuru ehunyanzvi muChina yekubika doro indasitiri yemidziyo. Zvinotora awa imwe nemaminitsi makumi mana kutyaira kubva kuShanghai Pudong International Airport kana maminetsi makumi mana kutyaira kubva kuNingbo Airport.
Isu takavaka timu yeinjiniya gumi nevakagadziri, kunyanya pano mainjiniya mashanu epamusoro vane makore anopfuura gumi nemashanu ekuziva kubatsira indasitiri yezvigadzirwa kushanduka nekuvandudza mune ramangwana.
Vashandi vedu vakawana ASME weld chitupa.
Zvigadzirwa edu akawana ASME, AS1210 chitupa.